သင်ပျော်ရွှင်ရန်ကူညီရန်အကောင်းဆုံးစာအုပ်များ - ကိုယ်တိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Self-help စာအုပ်များသည်နေ့စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသူအားလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ များစွာသောအမှုများတွင်၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်လိုအပ်သောအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်သော့များကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မရှိဟုခံစားမိခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည် ငါတို့ဘဝရဲ့ကဏ္ aspects အချို့ကိုပြောင်းလဲချင်တယ် ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာမဟုတ်ကြောင်း။
သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးသင်နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိမည့်သူများအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်သင်၏ဘဝသည်အခြေခံကျသောကြောင့်ဤလောကတွင်အရေးကြီးသောအမှတ်အသားတစ်ခုထားရန်သင့်အားလည်းရည်ရွယ်ထားသည်။ လူများသည်ဤစွမ်းရည်ကိုတွေ့မြင်ရန်အခက်တွေ့နေသည် အရာရာသည်လိုချင်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါကသူတို့သည်ကမ္ဘာကြီးကိုနာကျင်မှုနှင့်ဂုဏ်အသရေမရှိဘဲဖြတ်သန်းသွားသည်ဟုထင်လေ့ရှိသည်။
၎င်းသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောပုံမှန်ခံစားချက်ဖြစ်သော်လည်းသင်သိသင့်သည် မင်းရဲ့လက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ် သင်၏ဘဝတွင်သင်မကျေနပ်သောအရာများတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့နေရသောထိုသေးငယ်သော (သို့မဟုတ်ကြီးမားသော) ကျောက်တုံးများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အကြိမ်များစွာအကူအညီလိုအပ်ခဲ့သည်။
ဤအခြေအနေတွင်ရောက်ရှိနေသူအားလုံးအတွက်၊ သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းစွာလူအဖြစ်ကြီးပြင်းချင်သောသူတို့အဘို့။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ကုထုံးမလုပ်လိုသူသို့မဟုတ်မလိုချင်သူများအတွက်ပင်ကိုယ်တိုင်အကူအညီစာအုပ်များရှိခြင်းသည်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင် Self- အကူအညီအရင်းအမြစ်များကိုခေါ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးသောစာအုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပိုင်းမရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကအဲ့ဒီတည်ရှိမှုကိုသိလို့ပဲ၊ သူတို့ဟာမင်းကိုစကားတစ်ကြိမ်ထက်မကပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီနာမည်ကိုကျော်ကြားတဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကသူမကိုယ်တိုင်အကူအညီပေးရေးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအကြံပေးခဲ့တယ်။ သင်သံသယဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမှားမကင်းပါ၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါ၊ မည်မျှပင်အထင်ကြီးစေကာမူ၎င်းတွင်ရရှိသောအယူအဆများကိုအသုံးမပြုလျှင်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်ကူညီသည့်စာအုပ်ကိုသင်ဖတ်သည့်အခါအရေးကြီးသောနေရာတွင်ရှိချင်မှရှိမည်၊ မလိုချင်သောသူများအတွက်အကြံဥာဏ်များကိုလိုလိုလားလားရှိရန်ပွင့်လင်းသောစိတ်ထားဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။ အခြားအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်သည့်အခါသင်ဇာတ်ကောင်များ၏ဇာတ်ကွက်၊ ပုံဖော်ပုံနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတို့ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်ပါ။ စာအုပ်အားလုံးလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ.
ဤသည်၌လူသား၏စရိုက်လက္ခဏာ၊ ထင်မြင်ချက်နှင့်အရသာအမျိုးမျိုးတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားသူများအားဘဝမိတ်ဖက်များအဖြစ်ရွေးချယ်စေခြင်း၊ အခြားသူများကမုန်းတီးသောသို့မဟုတ်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့၏စရိုက်နှင့်အညီလိုက်ဖက်သောဂီတကိုနားထောင်စေသည် လာမယ့်တံခါးကိုလိုပဲ အတိအကျ, Self- အကူအညီစာအုပ်များဤမျှလောက်ဆက်ကပ်အပ်နှံဤမျှလောက်စာရေးဆရာများဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစာအုပ်သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည့်အရာနှင့်အနီးဆုံးရှိသောစာရေးဆရာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုကူညီသည့်အရင်းအမြစ်များအတွက်သင့်အတွက်ထိုအရာကိုလုပ်ဆောင်သည် နောက်ပြီးဒီစာအုပ်များမှာပရိုဖိုင်းအမျိုးမျိုးအတွက် Self- help စာအုပ်အတွက်အကြံပြုချက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအရောင်းရဆုံးနှင့်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်များကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ စာဖတ်ခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံရှာဖွေရန်ခက်ခဲသောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည့်ခေတ်သစ်တွင်ဤလုပ်ငန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အော်ဒီယိုစာအုပ်များရှိသည်။ အခြားအလုပ်များကိုလုပ်နေစဉ်၊ အားကစားလုပ်နေစဉ်၊ အလုပ်လုပ်နေသောအချိန်၌သို့မဟုတ်အိမ်တွင်အနားယူနေစဉ်သင်လိုချင်သည့်စာအုပ်ကိုသင်နားထောင်နိုင်သည်။ ပျော်ရွှင်သောစာဖတ်ခြင်း.
"Renaissance" သည်ခရစ် ၁၅၀၀ မှ ၁၆ ရာစုအတွင်းခရစ်တော်ဖြစ်သော ၁၄၀၀ မှ ၁၆၀၀ အတွင်းကာလဟုသတ်မှတ်သည်။
"ကြယ်များ၏ကောင်လေး" စာအုပ်၏ခေါင်းစဉ်သာလျှင်၎င်းသည်မှော်ဆရာစာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်မြင်တွေ့နိုင်စေပြီး ...
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
"Romanticism" ကို ၁၈ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံတို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်အပြုအမူမျိုး၊ ကောင်းသောအဖြစ်သတ်မှတ်သည်၊
အဆိုပါကဗျာဆန်သော function ကိုကဘာလဲနှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိရန်
လူသားသည်နှုတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်မွေးဖွားလာသည့်တစ်ခုတည်းသောနို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ...
သမိုင်းကြောင်းဟာကလေးဘဝကတည်းကငါတို့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ဟာလုံလောက်တဲ့သုတေသနပြုမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူး ...
စကားလုံးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးကိုဖြစ်စေ၊ ဖော်ပြခဲ့သောနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်တစ်စုံတစ်ရာကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အုပ်စုလိုက် ...
၁၁ ကျော်ကြားသောစာရေးဆရာများမှပြုလုပ်သော Avant-garde ကဗျာများ
အထင်ရှားဆုံးကဗျာဆရာများ၏ Surrealist ကဗျာများ
သင်မဖတ်နိူင်သော Baroque ကဗျာများ
နာမည်ကြီးလက်တင်အမေရိကစာရေးဆရာများ၏ထိပ်တန်းဇာတ်လမ်းတို ၁၀ တို